Ukuhlonza umkhiqizo, ukuqoqa imininingwane, ukuqondiswa kwemakethe - uYino
Imikhiqizo yokusebenzisa nsuku zonke
Imikhiqizo yokuvikela ubhadane
imisebenzi yezandla nezipho
imikhiqizo yezilwane ezifuywayo
Abasebenzi bethu abasebenza ngokuthengwa kwempahla bazokunikeza imininingwane ebalulekile ngesikhathi esifushane ebandakanya intengo ye-EXW evela kumhlinzeki, i-MOQ, ukuklama, isikhathi sokulethwa, ukulawula ikhwalithi, ukuphathwa kwezinto, ukuvunyelwa kwamasiko njll.
Ukuqoqa Imininingwane & Ukuqondiswa Kwemakethe
siqoqe izinhlobo ezahlukahlukene zolwazi lomhlinzeki. Futhi sinezinto zobungcweti ezikhuluma ulimi olushelelayo lwezwe lakho ezingakuqondisa ezimakethe.
Umthengi wethu oyingcweti owazi kahle imakethe uzokuqondisa emakethe. Ukuqhathanisa ikhwalithi nentengo, ukukhetha abahlinzeki kalula futhi ngokushesha, futhi ugcine isikhathi sakho esiyigugu.
sizolandela ngokuqinile isampula ukuhlola izimpahla.Uma uthenga imikhiqizo ethile yobungcweti efana nomshini sizothola izinto zobungcweti ezivela kulezi zindawo ukwenza i-QC. Futhi sikunikeze umbiko wokuhlola Kuphela ngemuva kwesiqinisekiso sakho sizoqala ukwenza inqubo yokuthumela.
Ngemikhiqizo eyenziwe ngezifiso, singakunikeza amasampula ukuze ukuqinisekise. Futhi sinaka nezitayela zemakethe futhi sikunikeza isampula elisha.
Ngakho Kungani i-YINO INTERNATIONAL CO., LTD
Ngemikhiqizo eyenziwe ngezifiso, singakunikeza amasampula ukuze ukuqinisekise
Uma uthenga eminye imikhiqizo yobungcweti efana nomshini sizothola izinto zobungcweti ezivela kulezi zindawo ukwenza i-QC
Isiqinisekiso Esisesigabeni Esiphezulu
Ngemuva kokuthola imvume yekhasimende sizofaka i-oda kubaphakeli abasebenzisa i-letterhead yenkampani yethu, bese sihlola isivumelwano ngokucophelela ukuqinisekisa ukuthi sinembile.
Ukuqhathanisa ikhwalithi nentengo, ukukhetha abahlinzeki kalula futhi ngokushesha, futhi ugcine isikhathi sakho esiyigugu.
I-YINO INTERNATIONAL CO., LTD iyinkampani yokuthekelisa enobuchwepheshe eneminyaka engaphezu kwengu-16 yesipiliyoni. Ihhovisi lethu elise-YIWU CITY esifundazweni iZheJiang, lelo ngelinye lamadolobha abaluleke kakhulu okuthekelisa eChina. Amakhasimende ethu avela eYurophu, eMelika, eNingizimu Melika, e-Afrika nakwamanye amazwe omhlaba.
100% Ukotini ithawula ezimthende Soft
12 Umbala Ipeni Setha 0.5 Gel Ipeni
5 e 1Family Fitness Ukuzivocavoca Izinsiza kusebenza Wheel R ...
Pet Chew Toys Squeaky Inkukhu Yenja
Degree Ifenisha Unyawo Engagqwali Ukusekela A ...
I-Artificial Flower Garland Eucalyptus Wedding Decor
Christmas Ukwaluka Amasokisi Snow Elk Worsted Stock ...
Matte Lipstick Manzi Square Tube Multicolo ...
Igumbi 70298, isitezi sesi-5, imakethe yokuhweba yamazwe omhlaba i-5, i-Yiwu City, iZhejiang, China.
Izinhlobo Zesihlangu Sobuso
imikhiqizo yokuvikela umqedazwe
Amathiphu wokubeka imisebenzi yezandla yasekhaya
Ungakugcina kanjani ubucwebe begolide?